Somaliland: Ethiopia Oo Maamulka Awdal Ku Soo Wareejiyay Saddex Nin Oo Baabuur Ka Dhacay Somaliland - Wargane News
Home English News Somaliland: Ethiopia Oo Maamulka Awdal Ku Soo Wareejiyay Saddex Nin Oo Baabuur...
Guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan iyo taliska ciidanka booliska gobolka Awdal,ayaa shalay fiidkii kala wareegay Maamulka Gobolka Sici ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, koox shufto ah oo gaadhi Xamuul ah ka dhacay gudaha Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo gaadhiga ay dheceen iyo saddex qof oo ay ku kaxaysteen.
Dhacdadan oo dhacday todobaad ka hor ayay ciidanka degmada Aw Barre ee gobolka Sici ee Jigjiga gacanta ku soo dhigeen gaadhiga la dhacay iyo kooxda dhaca geysatayba kadibna waxay shalay fiidkii kulan kula wareegeen Maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ka gobolka Awdal ee Somaliland deegaanka Gorayacawl oo u dhow soohdinta u dhaxaysa degooyinka Aw Barre ee Itoobiya iyo Boorama ee Somaliland.
Sidaana waxa sheegay Guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) oo khadka Telefoonka ugu waramay wargeyska DAWAN xalay.
“Caawa fiidkii (xalay)waxaanu kala wareegnay Maamulka gobolka Sici ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ciidanka degmada Aw Barre gaadhi Xamuul ahaa oo allaabooyin kala duwan siday oo koox shufto ahi ay afduubtay oo ay xadka Itoobiya ula tallaabeen iyo laba ka mid ah dablaydii wax afduubtay iyo saddex qof oo dhibanayaal ah oo ay ku qafaasheen gaadhiga,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Awdal.
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray.
“Gobolka Awdal xadka ayaa ku dhow markaa, marka ay wax dhacaan cidda dhibaatada geysataa waxay isku daydaa in ay dhankaa u baxsato laakiin wada shaqayn wanaagsan ayaa ka dhaxaysa labada gobol iyo labada dalba ammaankana labada ciidan way ka wada shaqeeyaan. markaa markii shuftadu gaadhiga ay dhacdayba waxaanu kala xidhiidhnay Maamulka Gobolka Sici ciidan ahaan iyo Maamul ahaanna way ka wada hawl galeen waanay soo qabteen imikana waxaanu kala wareegnay gaadhigii oo bad qaba iyo alaabtii saarnayd oo dhan iyo laba ka mid ah dablaydii afduubka geysatay iyo saddex qof oo dhinabayaal ah oo ay ku qafaasheen.”
“Kiiskan illaa imika waxaa u xidhan 8 qof oo ah budhcadda fal dambiyeedka ku kacday waxaanay ku jiraan gacanta Booliska gobolka Awdal, hantidii iyo gaadhiga aanu la wareegnayna imika annaga(Maamulka Gobolka Awdal)ayaa gacanta ku haya,”ayuu sheegay Mr. Ramaax.
Mar uu ka hadlayay gaadhigu waxaa uu siday iyo halka uu u rarnaa iyo nooca uu yahayba waxaa uu yidhi.
“Gaadhigu waa nooca ay dadku u yaqaanaan Shaambooga waxaanu siday noocyo bagaash oo kala duwan waxaanu u rarnaa dukaamo waxaanu u kala safrayay Gudaha Somaliland. imikana habtidii uu sidayna way dhan tahay gaadhiguna wuu bad qabaa. Maamulka Gobolka Sici ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ciidanka kililka shanaad ee fadhigoodu yahay degmada Aw Barre-na aad ayaan ugu amaanayaa sida wanaagsan ee ay iskaga xil saareen ee ay shuftadaa u soo qabteen hantidii ay dheceen iyo dadkii ay afduubteen oo nabad qabana ay noogu soo wareejiyeen.”
Somaliland: Mulkiilaha Shirkada Dp-World Oo Cusuumada U Sameeyey Madaxweyne Biixi Iyo Weftigiisa
Deg Deg: Xukuumadda Siilaanyo oo Madax Xanuun Ka Qaaday Khilaafka Saylac Oo Xal U Leh
Somaliland: Muuse Biixi “Waxaan Bogaadinayaa Taliyaha Ciidanka Booliska Iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Maanta Ku Guntaday In Qaranimaddu Ay Istaagto”
Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo Xafiiskiisa ku Qaabilay wafti ka Socda Banka Horumarinta Africa